China Christmas intsimbi kunye uhombiso mveliso kunye nabenzi | UKumkani
Abahombisi beKrisimesi bayila imiboniso ekhanyayo eyahlukileyo kwipropathi nganye esiyihombisayo, fumana ukuba sinokwenza njani ukuba iKrisimesi yakho ikhazimle ngesitayile kunye neklasi.
Ukuthatha ingqalelo kwisitayile ngasinye kunye nendawo ezikuyo kwindawo nganye. Ungalikhanyisa ikhaya lakho ukusuka phezulu ukuya ezantsi ngokhetho olunencasa kwimigca eluphahleni, ematyholweni, ematyholweni nasemithini, kwiidriveways nakwizango lokungena, kwimixokelelwane yesithsaba kunye nemithi enamanzi afumanekayo.
ebonisa isimo sengqondo sothando sokufunda.
Ungazisa umlingo weKrisimesi ngaphakathi kwekhaya lakho nawo, kunye nokuhonjiswa kwemithi yeKrisimesi yakudala kuba sisiqalo nje sokuhombisa kwethu ngaphakathi. Iminyango kunye neebhanisi zinokuhonjiswa ngentsimbi yethu kunye neegarland, kwaye kutheni ungongezi ezinye izinto ezithengisayo kulo nyaka ngamabala omlilo kunye namalungiselelo ezinto ezikhoyo.
Sukuba nexhala malunga nobunzima bokubeka nokudiliza izihombiso. Nokuba uyarenta okanye uyathenga kuthi, Kuluvuyo lwethu ukukwenzela wonke umsebenzi ukuze uhlale phantsi kwaye wonwabele umlingo weKrisimesi udityaniswa kanye phambi kwamehlo akho.
Ezi Imveliso yeKrisimesi inokuba njalo yenziwe nge-zinc ingxubevange, ubhedu, Yenziwe ngentsimbi eshayinayo, Pewter, ialuminiyam, iplastiki Kwaye ziphuhliswa ngenkqubo etyhidiweyo. Izinyithi zitshisa ngamanzi, zigalelwe kwisikhunta, kwaye zenziwe kukuphosa.
Egqithileyo Ibhukumaka kunye nomlawuli
Intsimbi yeKrisimesi kunye nezinto zokuhombisa